ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်သောအလယ်တန်းကျောင်းများရှိကျောင်းသားများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (2019) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်အပြောက်တွင်
ပညာရေးနှင့်လူမှုသိပ္ပံ၏အာဖရိကသုတေသနဂျာနယ်,6(1), 2019
စာရေးသူ - Michael Njeru1ဆော်လမွန် Nzyuko (Ph.D)2 နှင့်စတီဖင် Ndegwa (Ph.D)3
1လက်တွေ့စိတ်ပညာဌာန, Daystar တက္ကသိုလ်
PO Box 44400 - 00100, နိုင်ရိုဘီ - ကင်ညာ
2လက်တွေ့စိတ်ပညာဌာန, Daystar တက္ကသိုလ်
3လက်တွေ့စိတ်ပညာဌာန, Daystar တက္ကသိုလ်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွင်စိတ် - လူမှုရေးပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုကဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုရှင်းပြရာတွင် Classical Conditioning နှင့် Social Learning သီအိုရီများဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကအရေအတွက်သုတေသနချဉ်းကပ်မှု၌ဤလေ့လာမှုမှာအလုပ်ခံခဲ့ရသည် နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများ။ နမူနာအရွယ်အစားကိုကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရွေးချယ်ခဲ့သောကျောင်းသား ၆၆၆ ဦး ရှိသည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကိုမေးခွန်းလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးလူမှုသိပ္ပံအတွက်စာရင်းအင်းအထုပ် (SPSS) ဗားရှင်း ၂၁ ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များအရကျောင်းသားအရေအတွက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များပါဝင်သည်။ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပစ္စည်းများရရှိခြင်းနှင့်အင်တာနက်ဖွင့်ထားသောစက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ ဖြေဆိုသူအများစုကလမ်းညွှန်ပေးခြင်းနှင့်အကြံပေးခြင်းကိုပြစ်ဒဏ်ပေးမည့်အစားစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများကိုကျော်လွှားရာ၌ကူညီရန်အထောက်အကူအများဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ မိဘများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အုပ်ထိန်းသူများသည်သူတို့၏ကလေးများလုပ်ဆောင်နေသည့်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်၊ မိဘများနှင့်ဆရာများသည်သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်မှုဆိုင်ရာလက်ရှိအခြေအနေများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။
keywords: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ကျောင်းသားများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရုပ်ထုများ၊ စာအုပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံများကဲ့သို့သောမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြသောလိင်အပြုအမူဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများသည်ပုဂ္ဂလဓိare္ဌာန်ကျကျ၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ပုဂ္ဂလဒိis္ဌာန်ရှိပြီး၎င်း၏သမိုင်းကိုအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချထားသောရုပ်ပုံများကိုအခြားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် (Jenkins, 2017) ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းအထူးသဖြင့်အင်တာနက်မှတဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းသည်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မကြုံစဖူးနှင့်မတူကွဲပြားသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် (L¨ofgren-Martenson and Mansson, 2) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသည်။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုသတင်းပို့ကြသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်း / ပညာရေး / အလုပ်လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သောဘဝကဏ္inများတွင်အသုံးပြုသောအချိန်နှင့်ဆိုးကျိုးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ဖြင့်မကြာခဏလိုက်ပါလေ့ရှိသည် (Duffy, Dawson, & Das Nair, 2010) ။
ဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများလေ့လာခြင်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် Gilkersen (၂၀၁၃) ကစာမျက်နှာ ၄ ​​သန်းကျော်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပါသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစွာရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းစတင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်း။ ပထမအကြိမ်တွေ့ရှိမှုကိုအသက် ၁၁ နှစ်ခန့်တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအများဆုံးသုံးစွဲသူများမှာအသက် ၁၂ မှ ၁၇ နှစ်ကြားလူငယ်များဖြစ်ကြသည် (Gilkersen, 2013) ။
အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသောဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်အခြေခံဖြစ်သည်။ Freud ၏အဆိုအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်ကိုဖော်ပြသည်။ Sigmund Freud ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်စတင်သောလိင်အင်္ဂါအဆင့်တွင်အခြားသူများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ရသည့်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများပေါ်ပေါက်လာသည် (Berstein, Penner, Clarke-Stewart & Roy 2008)
အထက်တန်းကျောင်းရှိကျောင်းသားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များပြန်လည်နိုးထလာစေရန်နှင့်အစောပိုင်းပconflictsိပက္ခများနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူလူကြီးဘ ၀ သို့စတင်သည့်ကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်ရပေမည်။ Rosenthal နှင့် Moore (၁၉၉၅) ကဤအဆင့်တွင် oedipal စိတ်ကူးယဉ်များကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ရှိသောသူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုထပ်မံရှင်းပြသည်။ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင်ယောက်ျားလေးမြီးကောင်ပေါက်သည်အကျင့်ပျက်ခြင်းကိုမည်သူမဆိုပုန်းရှောင်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းကိုလျှို့ဝှက်လေ့ရှိသည်။ သတိမထားမိသောအဆင့်တွင် Rosenthal နှင့် Moore (၁၉၉၅) ကသူအားအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်သင့်လျော်စွာလည်ပတ်စေနိုင်မည့်ကောင်းသောလူမှုရေးစွမ်းရည်များအသုံးပြုရန်ကူညီပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်သတိလစ်မေ့မျောနေသောပwhichိပက္ခများကိုကိုင်တွယ်ပုံသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုမည်မျှကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကိုများစွာဆုံးဖြတ်လိမ့်မည် (Rosenthal & Moore 1995) ။ သိမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်သိသာထင်ရှားမှုမရှိနိုင်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုအယူအဆနှင့်လူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်နေရာထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုညှိနှိုင်းရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်သင့်တော်သောအကူအညီမရရှိလျှင်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များအပြင်အခြားအလှူရှင်များလည်းရှိသည်။ Strasburger (၂၀၀၉) အရပုံနှိပ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်နှင့်ပတ်သက်သောပညာရေး၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပုံနှိပ်မီဒီယာများတွင်ဥရောပရှိနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးပုံစံများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြန့်ဝေခြင်းကိုအရှိန်မြင့်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ပုဂ္ဂလိကဘဝများသို့ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်၎င်းသည်မီဒီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသောဆယ်ကျော်သက်များစွာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်မီဒီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ Rich (၂၀၀၁) ကမီဒီယာမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည့်အခြားမည်သည့်အကျိုးစီးပွားမျှမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘယ်တော့မျှမပိတ်သောပြပွဲနှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားအားလုံးဖြတ်သန်းသွားသောပြပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်အချိန်ပိုသုံးသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုသူများထက် ပို၍ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုတွေ့နိုင်သည်။
အပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အခြားအချက်တစ်ချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပြုမူခြင်းတို့သည်အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားများကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေခြင်းများကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ Laier နှင့် Brand (2016) တို့၏သုတေသနတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကိုယ်ပိုင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခြင်းအားသက်သေပြနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုများစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသောအခါများစွာသောသူတို့သည်အတွင်း၌နက်ရှိုင်းသောလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတုအတုများ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလိင်ဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်ခြင်းပုံစံများကိုစတင်အသုံးပြုလာကြသည်။ ဤရင်းနှီးမှုပုံစံများသည်မည်သည့်အခါကမျှဤလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်းသူတို့၏သဘောသဘာဝမှာအလွန်စွဲလမ်းစေပြီးခုခံရန်ခက်ခဲသည်။ Carvalheira, Bente နှင့် Stullhofer (၂၀၁၄) သည်ပြီးခဲ့သည့် ၆ လအတွင်းလိင်ဆန္ဒအရလျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောအိမ်ထောင်သည်များနှင့်ပေါင်းသင်းနေထိုင်သောအမျိုးသားများအားပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် အဖြစ်ကောင်းစွာ (Carvalheira et ။ al, 2014) ။ သူတို့၏လေ့လာမှုများကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုပြသခဲ့သည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များအကြားအင်တာနက်ရရှိခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ Jenkins (၂၀၁၇) အရ၊ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ် များမှစ၍ အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက်အားလုံး၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်တာနက်ကိုသုံးကြသည်။ ၆၃% သည်နေ့စဉ်အွန်လိုင်းသို့သွားပြီး ၃၆% သည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအွန်လိုင်းတွင်ရှိကြသည် (Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 2017) ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ ခုမှ ၁၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိကမ္ဘာ့အင်တာနက်အစီရင်ခံစာသည်ဗြိတိန်လူငယ် ၁၀၀ ရာနှုန်း၊ အစ္စရေးလူငယ် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ချက်ခ်လူငယ် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကနေဒါလူငယ် ၉၅% တို့သည်အင်တာနက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Lawsky, 1990) ။ ပျမ်းမျှအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးသည်မိုဘိုင်းပစ္စည်းသုံးခုပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုသည်ခရီးဆောင်နိုင်သောကြောင့်အကန့်အသတ်မရှိပြုလုပ်နိုင်သည် (ထို့ကြောင့် Roberts, Foehr, & Rideout, 93) ။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းသောဖြစ်စဉ်များ၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်လိင်ဆိုင်ရာနည်းဖြင့်ဆွဲဆောင်သောခေတ်ပြိုင်လူနေမှုပုံစံမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ Barlow နှင့် Durand (၂၀၀၉) တို့ကလိင်ရောင်း ၀ ယ်မှုဟူသောခေါင်းစဉ်တွင်ထင်ရှားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝပုံစံများမြင့်တက်နေသည်ဟုပြသသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒကိုပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ Odongo (၂၀၁၄) သည်ရုပ်မြင်သံကြားမှသူမဘဝအတွက်နောင်တရခဲ့သောမှားယွင်းသောစိတ်ဓာတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းဟောင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကိုးကားခဲ့သည်။ ဒီဘဝကသူမကို“ ရုပ်မြင်သံကြားလိင်ဥ n” လို့အမှတ်အသားပြုထားတယ်။ ဒီသတင်းကိုသူမကိုယ်တိုင်ပြောလေ့ရှိတာက "ဒီရုပ်မြင်သံကြားမှာထိထိရောက်ရောက်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၊ မိသားစုများဟာသူတို့ရဲ့ rooms ည့်ခန်းထဲမှာရှိနေစဉ်၊ ငါ့စတိုင်တော့ဘူး "။ သတင်းကျောက်ဆူးများကဤဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုသည်လိင်ဆိုင်ရာဥ being ဖြစ်ခြင်းနှင့်အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိသည့်အခြားသတင်းကျောက်ဆူးများနှင့်မီဒီယာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြproblemနာတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းစွာဝတ်ဆင်ထားသောလူနေမှုပုံစံကိုကျင့်သုံးပြီးနောက်သူတို့၏ဘဝလမ်းစဉ်အသစ်ကိုလက်ခံပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသော ၀ တ်စားဆင်ယင်ဟန်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည့်အရာနှင့်မထိတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Jenkins (၂၀၁၇) တွင်ဝက်ဘ်ကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးယခုအခါသူတို့၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဓါတ်ပုံများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သောကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန့်ပွားစေသည်ဟုဆိုသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များကိုလိင်မှုဆိုင်ရာဘဝပုံစံများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကသူတို့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုလေ့ရှိသောစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Kheswa and Notole (၂၀၁၄) ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်အခြားဒေသများတွင်ကြုံတွေ့ရသောဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစိန်ခေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စွန့်ပစ်ခံရခြင်းမရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အရှေ့ကိပ်ရှိအလယ်တန်းကျောင်းမှအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားအမျိုးသားကျောင်းသား ၁၀ ယောက်အားသူတို့၏လက်တွေ့လေ့လာမှုအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၊ ရွယ်တူချင်းဖိအားများနှင့်မိဘများ၏ကြီးကြပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင်အရက်အဆစ်နှင့်အရက်ဆိုင်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအောက်တွင်လူငယ်များသည်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအများဆုံးပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုနားမလည်နိုင်ပေ။ ၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အပြုအမူတို့၏အကျိုးဆက်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုသူတို့မသိဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအရင်းအမြစ်များနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များအနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများရှိကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
လေ့လာမှုသည်သဘာဝအားဖြင့်အရေအတွက်နှင့်နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိကျောင်း ၂ ကျောင်းကိုရည်ရွယ်သည်။ လေ့လာမှုတွင်ဖြေကြားသူများစွာပါဝင်သောကြောင့်ဤချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏တုန့်ပြန်မှုများမှအချက်အလက်များကိုကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်သည့်အလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဓမ္မဓိobject္ဌာန်ကျကျအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွင်စာရင်းသွင်းထားသည့်ကျောင်းသားများနှင့်ပုံစံ ၁ ကိုဖွဲ့စည်းရန်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းတွင်သင်တန်းတက်သည်။ အလယ်တန်းကျောင်းနှစ်ခုသည်လေ့လာမှုအတွက်သင့်လျော်သောကြီးထွားလာသောဆယ်ကျော်သက်လူ ဦး ရေရှိသောကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောနမူနာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးသည်မှာလေ့လာချက်သည်အသက် ၂၀ နှင့်အထက်ရှိကျောင်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အချက်အလက်ကောက်ယူသည့်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများ၏လူမှုလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်မေးခွန်းပုံစံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမဆုံးမေးခွန်းလွှာကိုသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်အသုံးပြုရန်စစ်ဆေးသည်။ မေးခွန်းပုံစံတွင်ပါ ၀ င်သူသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိ၊ မရှိနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်း၊ မေးခွန်း၊ အသက်၊ ကျား၊ မ၊ အတန်း၊ မိသားစုအကြောင်း၊ စနစ်တကျနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်မေးခွန်းပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်အစောပိုင်းက၎င်းတို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်နိုင်သည့်အရာများကိုဖြေဆိုသူများအားရှင်းလင်းရာတွင်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
အချက်အလက်များကိုလူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်စာရင်းအင်းအစု (SPSS) ဗားရှင်း ၂၁ ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်မေးခွန်းလွှာမှကောက်ယူရရှိသောအချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်းအထုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်၊ ကုဒ်နှင့်ရလဒ်ကိုသုတေသနတွေ့ရှိချက်များကိုဇယားများနှင့်ကိန်းဂဏန်းများဖြင့်တင်ပြရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သုတေသနပြုစဉ်အတွင်းလူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများသည်သူတို့၏ကျောင်းအုပ်မှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြသရန်လိုသည်။
ကျောင်းသားများ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ
ဤလေ့လာမှုတွင်ကျား၊ မဆိုင်ရာအသက်၊ အရွယ်အလိုက်လေ့လာမှုအဆင့်နှင့်မိဘအဆင့်ကိုအခြေခံသည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်နမူနာသည်လူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများ၏ထက်ဝက်ကျော် (၅၄.၈%) သည်အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး ၄၅.၂% မှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ဤအချက်ကရွေးချယ်ထားသောနမူနာတွင်မိန်းကလေးကျောင်းသားများထက်အမျိုးသားယောက်ျား ဦး ရေပိုများကြောင်းပြသသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယောက်ျားကျောင်းသားများသည်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများထက်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ရွေးချယ်ထားသည့်ကျောင်းသား၏အသက်အရွယ်မှာ ၁၆.၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ကိုယ်စားပြုနမူနာမှကျောင်းသားအများစုသည်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျောင်းသားများ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၅.၃%) သည်ပုံစံတစ်မျိုးမှဖြစ်ပြီး ၂၄.၅% သည်ပုံစံ ၂ မှဖြစ်ပြီး ၂၅.၃% မှာပုံစံသုံးနှင့် ၁၄.၆% သည်ပုံစံလေးမှဖြစ်သည်။ ဤသည်ကကျောင်းသားများသည်အခြားအတန်းများနှင့်မတူဘဲစစ်တမ်းတွင်ပါ ၀ င်လိုစိတ်ပိုမိုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဖြေဆိုသူများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၀%) သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိဘနှစ်ပါးစလုံးနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၂၀.၂% မှာကြင်ဖော်မဲ့မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉.၈% ကသူတို့သည်မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ပြီးတစ် ဦး တည်း၊ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူ၊ ကွာရှင်းထားသောသို့မဟုတ်ကွဲကွာနေသောမိဘများနှင့်အတူမိဘတစ် ဦး ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးမှမိဘမဲ့များနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပါဝင်သူအများစုသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိဘနှင့်ကြင်ဖော်မဲ့မိဘနှစ် ဦး စလုံးမှကြီးပြင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလေ့လာမှုသည်နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိပစ်မှတ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအချက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအရင်းအမြစ်များနှင့်ကျောင်းသားများအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ရွေးချယ်ထားသောနမူနာမှကျောင်းသားများသည်တစ်ပတ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏ပျမ်းမျှအချိန်ကိုဖော်ပြရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ပုံ ၁ သည်သူတို့၏အဖြေများ၏အနှစ်ချုပ်ကိုပြသည်။
ပုံ 1 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျောင်းသားများ၏အချိန်ဖြန့်ဝေခြင်း
ကျောင်းသားအများစု၏ ၈၂.၅% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်တစ်နာရီပင်မပြည့်မီ၊ ၉.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်တစ်နာရီမှနှစ်နာရီ၊ ၆.၃% သောအချိန်မှသုံးနာရီမှလေးနာရီကြာ၊ ၁.၆% က ၅ နာရီကိုအသုံးပြုကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ ၁၇.၅% သည်တစ်နာရီကျော်သောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုကြသည်။
ကျောင်းသားများအားသူတို့အသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုထပ်မံတောင်းခံခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုများဖြန့်ဝေမှုကိုပုံ ၂ တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ပုံ2ရရှိနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရင်းမြစ်များအပေါ်ကျောင်းသားများ၏တုံ့ပြန်မှု
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်သည့်ကျောင်းသားများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၃.၅%) သည်သူတို့၏ဖုန်းများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၁၉% သည် DVD များမှဗီဒီယိုများ၊ ၉.၅% သည်မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဆိုက်ဘာမှ ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃.၂% သည်အခြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်သည့်ကျောင်းသားအများစုသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသီးသန့်ကြည့်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုထူထောင်ရန်အတွက်ဖြေဆိုသူများသည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုများကိုပုံ (၃) တွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
ပုံ3အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှု
ကျောင်းသားထက်ဝက်ကျော်က ၄ င်းတို့သည်အင်တာနက်ကိုမသုံးနိုင်ကြကြောင်း ၄၅.၄% ကအင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ရကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤအချက်ကကျောင်းသားထက်ဝက်နီးပါးသည်အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဟုပြသသည်။
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှု
အဆိုပါလေ့လာမှုလူ ဦး ရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည် (လိင်၊ မိဘအခြေအနေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် Chi-square စမ်းသပ်မှုကိုအသင်းအဖွဲ့တည်ထောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားလိင်အလေ့အထနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ စားပွဲတင် 1 chi- စတုရန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။
လိင်အလေ့အထနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဘို့အ Chi-square စမ်းသပ်မှု
Chi square စမ်းသပ်မှုများသည်လိင်အလေ့အထနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ 0.05, χ² (1, N = 658) = 10.690, P = .001 ဤအရာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အပေါ်မူတည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားမိဘအခြေအနေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ စားပွဲတင်2chi- စတုရန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။
Chi square စမ်းသပ်မှုသည်မိဘအခြေအနေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ 0.05, χ² (1, N = 658) = 10.690, P = .001 ဤအရာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အပေါ်မူတည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ စားပွဲတင်3chi- စတုရန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အပြာဆိုင်ရာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုအတွက် Chi-square စမ်းသပ်မှု
Chi square စမ်းသပ်မှုများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ 0.05, χ² (1, N = 658) = 10.690, P = .001 ဤအရာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အပေါ်မူတည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
လေ့လာမှုအရကျောင်းသား (၈၂.၅%) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်နာရီတောင်မပြည့်ကြပါ။ Wallmyr နှင့် Welin (၂၀၀၆) ၏ယခင်လေ့လာမှုများအရအသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းယောက်ျားလေးများ၏ ၄၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအဓိကကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အခြား ၃၉.၅% သည်၎င်းကိုသိလိုစိတ်မှစောင့်ကြည့်ပြီး ၂၈.၅% သည်“ အေးသည်” ဖြစ်သောကြောင့်။ Goodson, McCormick & Evans (82.5) ၏လေ့လာမှုများတွင်လည်းယောက်ျားများကလိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဖျော်ဖြေမှုကိုစိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုသည်ယောက်ျားများကပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ကွယ်တွင်အကြောင်းပြချက်နှင့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာတိုးတက်စေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုအဆင့်တွင်ရောက်ရှိနေသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအလွန်လိုအပ်သည် (Erickson, 2006) ။
ကျောင်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ရင်းမြစ်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများအရဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များသည်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုစာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်များကို ၅၀% အထိအသုံးပြုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Ybarra & Mitchell, 50) ။ Muchene (၂၀၁၄) မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဘောင်တွင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဗီဒီယိုအမျိုးမျိုးသည်ဒေသခံမြင်ကွင်းသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းပြသထားသည့်ရဲရင့်ခြင်း၊ sexy နှင့်မျက်လုံးစိုစွတ်နေသည့်အစွန်းရောက်အနုပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်အတွက်ကျန်းမာခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကငြင်းခုံမှုကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်များမှပိတ်ပင်ထားခံရသည့်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များနှင့်အပြိုင်အဆိုင်ကခုန်နေသည့်ယောက်ျားလေးတီးဝိုင်းတစ်ခု၏အဆိုအရသင်ပြွန်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသူ ၆၂၁၅၀၀ ရှိသည်။ Muchene (၂၀၁၄) အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်းသည်လူငယ်များအတွက် ပို၍ ဖက်ရှင်ကျလာသည်။
ဆယ်ကျော်သက်များကအင်တာနက်ကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်းသည်အတော်အတန်မြင့်မားသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ CCK (၂၀၁၃) အရကင်ညာနိုင်ငံတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ဦး ရေမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ၂၁.၂ သန်းရှိသည်။ လူ ဦး ရေရဲ့ 2013% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောအင်တာနက်တိုးပွားလာနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်ထိတွေ့မှုတိုးပွားလာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူငယ်များစွာ၏ဘဝအသက်တာ၌အင်တာနက်ကိုလက်ရှိနှင့် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ထားသည် (Lenhart, Ling, Campbell, & Purcell, 21.2; Lenhart, Purcell, Smith, & Zickur, 2013) ။ ဥပမာအားဖြင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ရှိဆယ်ကျော်သက်အားလုံး၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်တာနက်ကိုသုံးကြသည်။ ၆၃% သည်နေ့စဉ်အွန်လိုင်းသို့သွားပြီး ၃၆% သည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအွန်လိုင်းတွင်ရှိသည် (Lenhart, Purcell et al ။ , 52.3) ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ ခုမှ ၁၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိကမ္ဘာ့အင်တာနက်အစီရင်ခံစာသည်ဗြိတိန်လူငယ် ၁၀၀ ရာနှုန်း၊ အစ္စရေးလူငယ် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ချက်ခ်လူငယ် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကနေဒါလူငယ် ၉၅% တို့သည်အင်တာနက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Lawsky, 2010) ) ။
ရလဒ်အနေဖြင့်လိင်အလေ့အထနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Alacron, Iglesia, Cassado နှင့် Montejo (2019) ၏လေ့လာမှုနှင့်အညီမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူသည့်မလိုက်နာသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများရှိလူနာများ၏ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုတွင်ရှင်းလင်းသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖော်ထုတ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များ (သို့) hypersexual ဘာသာရပ်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း (ထိန်းချုပ်ထားခြင်း) နှင့်လိုချင်သော (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ) အကြားခြားနားချက်များကိုဖော်ပြသည်။ Kamaara (2005) ၏အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ လေ့လာမှုအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကျပ်အတည်းနှစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိရန်နှင့်သူတို့၏စံနမူနာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကျပ်အတည်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနိုးထလာခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်များအားအထူးသဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန္ဒရှိခြင်းတို့ပါဝင်သောလိင်မှုကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အခွင့်အရေးမရှိသောကျောင်းသားများသည်သူတို့၏လိင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွယ်တကူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုကြသည်။
ထို့အပြင်ရလဒ်များသည်မိဘအခြေအနေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှအပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများစွာသည်အချို့သောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ မည်သည့်လေ့လာမှုကမျှမိဘများ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများ၏နောက်ခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ၎င်းကမိဘ၏နောက်ခံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲခြင်းအပေါ်သြဇာမသက်ရောက်သည့်အချက်ကိုတရားမျှတစေသည်။
ရလဒ်များသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ Laier နှင့် Brand (2016) တို့မှအလားတူအလားအလာကိုအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုယ်ပိုင်ကြည့်ခြင်းတွင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခြင်းအားသက်သေပြနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုများစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိုအပ်မှုတို့ကလေ့လာခဲ့သည်။ Carvalheira, Bente နှင့် Stullhofer (၂၀၁၄) မှသုတေသနပြုချက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွားသောအတွေ့အကြုံရှိသောအိမ်ထောင်သည်နှင့်ပေါင်းသင်းနေထိုင်သောအမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အနည်းဆုံးတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူအများစုသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုကြသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့ကြသည် (Carvalheira et ။ al, 2014) ။
ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားလိင်အလေ့အထနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုလေ့လာမှုကကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသောကျောင်းသားများသည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းထက်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုနှိုးဆွရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစိတ်ကူးများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ထို့အပြင်လေ့လာမှုကကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်ထားသောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအထီးကျန်လှုပ်ရှားမှုဟုအများအားဖြင့်ယုံကြည်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုသူသည်လိင်မှုဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုပုံစံများကိုအပြာစာပေပေါ်တွင်မှီခိုအားထားခြင်းနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Alarcón, R. , Iglesia, JI, Casado, NM, & Montejo, AL (2019) ။ Online Porn စွဲ - ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်သောအရာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လက်တွေ့ဆေးပညာဂျာနယ်, 8(1), 91 Doi: 10.3390 / jcm8010091
Barlow, DH နှင့် Durand, VM (2009) ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ: တစ်ခုပေါင်းစည်းချဉ်းကပ်။ Mason ဆို, Ohio: Wadsworth Cengage Learning
Berstein, DA, Penner, LA, Clarke-Stewart, အေနှင့်ရွိုင်း, EJ (2008) ။ စိတ်ပညာ (8th ထုတ်ဝေ) ။ ဘော်စတွန်, MA: Houghton Mifflin ။
Carvalheira, အေ, Bente, တီနှင့် Stullhofer, အေ (2014) ။ အမျိုးသားများ၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုဆက်စပ်မှု - လက်ဝါးကပ်တိုင် - ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာမှု။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်။ အတွဲ ၁၁, Iss 1. 154. 164 - XNUMX ။
ကင်ညာ၏ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်။ (၂၀၁၃) သုံးလတစ်ကြိမ်ကဏ္2012အလိုက်စာရင်းအင်းများ ၂၀၁၂/၁၃ ဘဏ္Financialာရေးနှစ်အစီရင်ခံစာ (Aprilပြီ - ဇွန်၊ ၂၀၁၃)။ https://ca.go.ke/wp-content/uploads/2018/02/Annual-Report-for-the-Financial-Year-2012-2013.pdf မှရယူရန်
Duffy, A. , Dawson, DL နှင့် Das Nair, R. (2016) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အပြာစာပေစွဲချက် - အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အစီရင်ခံစာအပေါ်သက်ရောက်မှုများအားစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Med။ 2016 မေလ၊ ၁၃ (5): 760-77
Erikson, EH (1968) ။ အထောက်အထား: လူငယ်နှင့်ပဋိပက္ခ။ အောက်စဖို့, အင်္ဂလန်: Norton & Co. ,
Goodson, P. , McCormick,,, & အီဗန်, အေ (2001) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက် 30 (2), 101-118
Gilkersen, L. (2012)၊ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်သင်၏စိတ်ကိုယိမ်းယိုင်စေကြောင်းသက်သေပြနိုင်သောနည်းလမ်း ၅ ခုနှင့်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်ကျမ်းစာနည်းလမ်း ၃ ခု။ http://www.covenanteyes.com/brain-ebook/ မှရယူရန်
Jenkins, JP (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ: https://www.britannica.com/topic/pornography မှရယူရန်
ကာမာရာအီ (၂၀၀၅) ။ လိင်၊ လူငယ်လိင်နှင့် HIV နှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ် - ကင်ညာအတွေ့အကြုံ။ ကင်ညာ - AMECEA Gaba ထုတ်ဝေမှုများ။
Kheswa, JG, & Notole, အမ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏သက်ရောက်မှုတောင်အာဖရိက၊ ကရင်အရှေ့ပိုင်းရှိဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အရည်အသွေးလေ့လာမှု။ လူမှုသိပ္ပံမြေထဲပင်လယ်ဂျာနယ်,5(20), 2831 ။
Laier, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2016) ။ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုပြီးနောက်ကြည့်ရှုခြင်းအပြောင်းအလဲသည်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုသည့်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုတင်ပြသည်, 5, 9-13 ။
Lawsky, ((2008) ။ အမေရိကန်လူငယ်များအင်တာနက်အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်း - စစ်တမ်း။ ရိုက်တာသတင်းဌာန။ https://www.reuters.com/article/us-internet-youth/american-youth-trail-in-internet-use-survey-idUSTRE4AN0MR20081124 မှရယူရန်
Lenhart, အေ, လိန်း, R. , ကမ့်ဘဲလ်, အက်စ်, & Purcell, K. (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Pew သုတေသနစင်တာ။
Lenhart, အေ, Purcell, K. , Smith, အေ, & Zickur, K. (2010) ။ လူမှုမီဒီယာနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များကြားတွင်အသုံးပြုသည်။ Pew အင်တာနက်: Pew အင်တာနက် & အမေရိကန်ဘဝစီမံကိန်း။ https://www.pewresearch.org/internet/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ မှရယူရန်
L¨ofgren-Martenson, အယ်လ်, & Mansson, အက်စ် (2010) ။ တပ်မက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဘဝ - ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအမြင်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုတစ်ခု။ ဂျာနယ် သုတေသန, 47, 568-579 ။
Muchene, အီး (2014) ။ Full- front Nudity, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့် Raunchy သီချင်းစာသား။ အဆိုပါစံသတင်းစာ, နိုင်ရိုဘီ, ကင်ညာ: 20th ဇွန်လ, 2014: No.29622 စစ 10-11
Odongo, D. (2014) ။ Arunga: တီဗီလိင်ဥ w များကမိန်းမများကိုထိခိုက်သည်။ The Nairobian ။ https://www.standardmedia.co.ke/article/2000103084/arunga-tv-sex-sirens-hurt-wives မှရယူရန်
Rich, အက်ဖ် (2001) ။ ကြီးထွားလာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစက်မှုလုပ်ငန်း။ https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1124343 မှရယူရန်
Rosenthal, D. & Moore က, အက်စ် (1995) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လိင်။ နယူးယောက်: Routledge
ရောဘတ်, D. , Foehr, U. နှင့် Rideout, V. (2010) ။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်သုခချမ်းသာ - အပြုသဘောဆောင်ရန်အနာဂတ်လမ်းညွှန်များ။ စိတ်ပညာ, Vol.3 No.12A
Strasburger, V. (2010) ။ လိင်၊ သန္ဓေတားခြင်းနှင့်မီဒီယာ။ ကလေးအထူးကု ။၁၂၆။ 576-582
Wallmyr G. အ, & Welin C. (2006) ။ လူငယ်များ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင် - ရင်းမြစ်များနှင့်သဘောထားများ။ ကျောင်းသူနာပြု၏ဂျာနယ် 22: 290-95 ။
Ybarra, ML နှင့် Mitchell က, K. (2005) ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားစစ်တမ်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ ၈, 473-486